कति प्रकारका हुन्छन बजेट, किन सामान्य व्यक्तिदेखि राष्ट्रका लागिसमेत महत्वपूर्ण हुन्छ बजेट ? « Bizkhabar Online
कति प्रकारका हुन्छन बजेट, किन सामान्य व्यक्तिदेखि राष्ट्रका लागिसमेत महत्वपूर्ण हुन्छ बजेट ?
29 May, 2022 10:59 am
काठमाडौं । नेपालमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज प्रस्तुत हुँदैछ । नेपालमा हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को बजेट आज दिउँसो ४ बजे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्दै छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/ २०८० को राजश्व आय र खर्चको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नेछन् । नयाँ बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
बजेट भनेको के हो ?
नेतृत्वको विषयमा लेख्ने प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक जोन सी म्याक्सवेलका अनुसार–बजेट भनेको तपाईको पैसा कहाँ गयो भनेर सोच्नुको सट्टा यो कहाँ जानुपर्छ भनेर निर्देशित गर्नु हो । बजेटका यस्ता धेरै परिभाषाहरू उदाहरणका रूपमा रहेका छन् । तर, सजिलो भाषामा बुझ्दा–यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले बजेट बनाइरहेको छ भने, त्यसको अर्थ उसले निश्चित समयमा आफ्नो आम्दानी कहाँबाट आउँछ र कहाँ खर्च गर्छ भन्ने अनुमान गरिरहेको हुन्छ । यसले बजेटमा दुईवटा कुरा स्पष्ट पार्छ ।
पहिलो : बजेट निश्चित समय वा घटनाको लागि हुन्छ, जस्तै एक हप्ता, एक महिना, एक वर्ष, एक दिनका लागि । बजेट कुनै पनि आकार र प्रकारको हुन सक्छ । जस्तै विवाह बजेट, पार्टी बजेट, घर बजेट आदि ।
अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले आज ल्याउने बजेट देशको बजेट हो । यो बजेट आर्थिक वर्ष २०७९ साउन १ देखि २०८० असार मसान्तसम्मको हुनेछ । त्यसैले यसलाई ‘बजेट २०७९–८०’ भनिन्छ । अर्थमन्त्री शर्माले २०७९–८० को बजेट प्रस्तुत गर्दा उनले वास्तवमा साउन १, २०७९ देखि असार ३१, २०८० सम्मको अनुमानित खर्च र आम्दानीको लेखाजोखा प्रस्तुत गर्नेछन् ।
दोश्रो : बजेट अनुमान मात्रै हो र भविष्यको बारेमा अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । यी अनुमानहरू बनाउनका लागि तथ्यांक, तथ्याङ्क र वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रयोग गरियो भने मात्र अनुमानहरू सही हुन्छन् । सरकारको बजेटमा यस्तै हुन्छ । एकपटक बजेट आएपछि परिवर्तन हुन सक्दैन भन्ने होइन । समय समयमा समीक्षा गरिरहनुपर्छ । बजेट अघि डाटा र प्रतिक्रिया सङ्कलन गर्न हप्ता वा महिनौ लाग्छ । त्यसपछि मात्रै बजेट तयार हुन्छ ।
बजेट कति प्रकारका हुन्छन् ?
अन्य कुराबाहेक बजेटमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आय र व्ययको लेखाजोखा हो ।
सरप्लस बजेट– आय र व्ययको लोखजोखापछि बचत रहन्छ भने त्यो बजेट एक सरप्लस बजेट हो । किनभने आम्दानी र खर्चको पूरा हिसाबपछि केही ‘अतिरिक्त’ पैसा बाँकी रहन्छ, जसलाई विभिन्न योजनामा खर्च गर्न सकिन्छ ।
घाटा बजेट–घाटा भनेको घाटा वा कमी हो । आम्दानी कम र खर्च बढी भए आय र व्ययको योगफल बराबर बनाउन आयको शीर्षकमा उधारो लिनुपर्छ । त्यसकारण यस्तो बजेट घाटा बजेट बन्छ ।
ब्यालेन्स बजेट– यस्तो बजेट जसमा आय जति खर्च हुन्छ त्यसलाई ब्यालेन्स बजेट भनिन्छ । अर्थात्, त्यो बजेटमा ‘उधारो’ वा ‘बाँकी पैसा’ रहँदैन् ।